January 11, 2020 - नवयुग
Jan112020 by nawayugaNo Comments
इरानी क्षेप्यास्त्रका कारण युक्रेनको एउटा यात्रुवाहक विमान बुधवार तेहरानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको सङ्केत उपलब्ध प्रमाणले गरेको पश्चिमा देशका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्रुटिवश त्यसो भएको हुन सक्छ। क्यानडा र युकेका नेताहरूले उक्त विमान दुर्घटनाको सम्बन्धमा पूर्ण र विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। दुर्घटनामा विभिन्न देशका १७६ नागरिकको मृत्यु भएको थियो। तर इरानले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार नभएको भन्दै त्यस्तो दाबीको खण्डन गरेको छ। इरानी सरकारका एक प्रवक्ताले पश्चिमा देशले लगाएको आरोपप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। के छ अनुमान? इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैनिकहरू बसेका दुईवटा आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको केही घण्टापछि नै उक्त विमान दुर्घटना भएको थियो। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको अनुमानअनुसार विमान दुर्घटनाको स
आधुनिक नेपालका निर्माता मानिएका पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीका केही पक्षबारे केही विवाद विद्यमान छन्। तत्कालीन गोरखा राज्यमा विसं १७७९ पुस २७ गते जन्मिएका शाह २० वर्षको उमेरमा राजा बने। साना राज्यको एकीकरण अभियानमा लागेका शाहले काठमाण्डू उपत्यकाका तीन राज्य सहित धेरै राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए। उनको मृत्यु ५२ वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा भयो। तर उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। बडामहाराजधिराज पनि भनिने पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यबारे कस्ता धारणा देखिएका छन् र प्रामाणिक तथ्यहरूले के भन्छन्? इतिहासकार दिनेशराज पन्तको विश्लेषण नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ आश्विन १५ गते नुवाकोट विजय गरेर उपत्यका प्रवेशको बाटो खोलेका थिए। उनले त्यसपछि क्रमश: काठमाण्डू खाल्डोमा रहेका मल्ल राजाहरूद्वारा शासित तीनवटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन
झण्डै पचास वर्षअघि इरानको फार्स प्रदेशस्थित शिराज शहरबाट ६० किलोमिटर पूर्वोत्तरमा पर्ने पर्सेपोलिसमा करिब ६० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए। राजतन्त्र भएका सबैजसो देशबाट राजा-रानी वा राजकुमार-राजकुमारीले सहभागिता जनाएको त्यस भेलामा नेपाली पाहुना बन्न त्यति बेला पुगेका थिए- राजा महेन्द्र र रानी रत्न। तत्कालीन इरानी शाह (राजा) मोहम्मद रेजा शाह पाह्लभीले आयोजना गरेको 'फारसी साम्राज्यको पच्चीस सय वर्षगाँठ'को चर्चा त्यसबेला संसारभर भइरहेको थियो। विश्वभर चर्चामा रहेको उक्त कार्यक्रमका विभिन्न सत्रका साथै ऐतिहासिक पोसाकमा ठाँटिएर सैनिकहरूले गरेको विशेष परेडमा समेत महेन्द्र र रत्न सहभागी भए। परेडमा सैन्य पोसाक लगाएका महेन्द्र र सेतो रङको साडी लगाएकी रत्न सहभागी भएका तस्बिरहरू अहिले पनि इन्टरनेट अभिलेखहरूमा देख्न सकिन्छ। विभिन्न लिखित स्रोत र जानकारहरू
एजेन्सी- मानिसहरुका अनेक सोच तथा चाहना हुन्छन् । सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । बेलाबखत यस्तै अनौठा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । एउटा विचित्रको घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ एक धनाढ्यले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विहे गर्नेलाई साँढे ३ करोडको इनाम दिने घोषणा गरेका छन् । छोरीको बिहे गराउनका लागि थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले अनौठो घोषणा गरेका हुन् । कन्याकुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई उनले उल्टै इनामस्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड (झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेका हुन् । तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त- केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने । दोस्रो- केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो- केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी
धावनमार्ग हिउँले ढाकेपछि सिमकोट, दुनै र मुगुमा हवाई सेवा बन्द हुम्लाको लिमीसँग दुई सातादेखि सम्पर्क विच्छेद वीरेन्द्रनगर — बाक्लो हिमपातका कारण कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सातादेखि हवाई र सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ । पहिलेको हिउँ पग्लिन नपाउँदै पुनः हिमपात भएपछि तीन जिल्लामा हवाई र सञ्चार सेवा प्रभावित भएको हो । यस पटकको हिउँदमा कर्णालीमा तीनपल्ट भारी हिमपात भइसकेको छ । सडक सञ्जालले नजोडिएको जिल्ला हुम्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयको बाहिर आउजाउ रोकिएको छ । धावनमार्गमै बाक्लो हिउँ जमेपछि हुम्लाको सिमकोट, डोल्पाको दुनै र मुगुको रारा विमानस्थलमा उडान– अवतरण ठप्प छ । नेपाल टेलिकमको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख नवराज खतिवडाका अनुसार फोन सेवा अवरुद्ध रहेका क्षेत्रमा मर्मतका लागि गएका कर्मचारी हिउँमा अड्किएर बसेका छन् । दैलेख र कालीकोटको सिमाना महाबु लेकमा रहेको रिपिट